Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Tareenka » Tareen cusub oo jaban oo ka yimid London kuna socda Edinburgh
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Scotland Breaking News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Tareen cusub oo qiimo jaban ah oo ka socda London kuna socda Edinburgh ayaa carqaladeyn kara adeegyada tareenka iyo hawada ee hadda jira
Ra'yi ururin dhowaan la sameeyay ayaa daaha ka rogtay in 11% jawaabeyaasha adduunka ay hadda leeyihiin miisaaniyad fasax oo ka hooseysa tii hore ee COVID, 37 %na aysan awoodin inay fasax galaan mustaqbalka dhow sidaa darteed adeegga cusub ee qiimaha jaban ayaa la soo dhaweyn doonaa.
Bilawga tareenka jaban ee Lumo ayaa daboolaya miisaaniyadda iyo welwelka deegaanka.
Qaabka adeegga tareenka ee jaban ee Lumo wuxuu noqon karaa mid aad loogu jecel yahay dadka rakaabka ah.
In kasta oo adeeggu yahay mid raqiis ah, Wi-Fi lacag la'aan ah, iyo madadaalo dalbasho ayaa dhammaan loo heli doonaa.
Bilaabidda Lumo ee adeegyada tareenka ee jaban waxay carqaladeyn kartaa adeegyada tareenka iyo hawada ee hadda u dhexeeya London iyo Edinburgh. Qaabkeeda qiimaha jaban oo ay weheliso diiradda saaridda yareynta saamaynta bay'ada ayaa si wanaagsan ugu faanaysa beddelka isbeddellada socdaalka maaddaama ay waaxda ka soo kabanayso masiibada.
Adeegga tareenka jaban ee Lumo wuxuu noqon karaa mid caan ah. Socotada Ingiriiska waxay caadeysteen qiimayaasha aadka u sarreeya iyo adeegyo tayadoodu hooseyso oo, ka hor COVID, inta badan dadku buux dhaafiyeen. Daah -furka waddada hawlwadeennada miisaaniyadda cusub ee u dhexaysa Edinburgh iyo London ayaa lagu wadaa inay noqoto mid carqaladeeya iyada oo ay ugu wacan tahay tartan la’aan ka dhex jirta hawlwadeennada tareenka ee UK. In kasta oo ay tahay mid raqiis ah, Wi-Fi bilaash ah, iyo madadaalo dalbasho ah ayaa dhammaan loo heli doonaa. Wakhtiyada safarka oo kaliya 10 daqiiqo ayaa ka dheer kan hadda jira ee LNER, Lumo waxay u taagan tahay inay guulo ka gaadho suuqa tartanka.
Iyada oo miisaaniyadaha la fidiyay, hirgelinta adeeg tareen oo jaban ayaa si fiican ula ciyaari doona socotada lacag-la'aanta ah halka baahida gudaha ay aad ugu badan tahay UK. Qiimaha jaban wuxuu noqon doonaa mid muhiim ah si looga jawaabo xasaasiyadda qiimaha korodhay ee dadka socotada ah. Dad badan ayaa dareemay qaniinyada maaliyadeed ee masiibada taasoo keentay adkeynta miisaaniyadda qoyska iyo safarka. Sidoo kale, natiijooyinka sahanka Macaamiisha ee 2021 ayaa shaaca ka qaaday in 62% jawaabeyaasha UK ay 'aad u' yihiin, 'waxyar', ama 'aad uga' walaacsan yihiin xaaladdooda maaliyadeed ee shaqsiyeed, taasoo sii xoojinaysa baahida adeegyada tareenka ee qiimaha jaban.
Lumo oo tartankeedu yahay £ 15 (US $ 20.78) oo ah ikhtiyaarka ugu hooseeya ee qiimaha ugu jaban ayaa kicin kara baahida safarka ee London iyo Edinburgh. Qiimaha jaban ayaa lagu wadaa inuu ka jaban yahay duulimaadka jaban wuxuuna cadaadis tartan geli karaa easyJet iyo, ilaa xad, British Airways. Qiimuhu waa furaha soo jiidashada caadada inta lagu jiro marxaladda soo kabashada COVID-19, Lumo waxay leedahay qaab ganacsi oo sax ah oo lagu guuleysto.
Socotadu waxay u badan tahay inay saamayn ku yeelato sida bay'ad ahaan wax -soo -saar ama adeeg u yahay bey'ad u habboon. Sahanka macaamiisha Q1 2021 ayaa shaaca ka qaaday in 70% UK jawaabeyaasha ayaa 'had iyo jeer', 'badanaa', ama 'mararka qaarkood' saameeya qodobkan.
Lumo oo xoogga saareysa inay noqoto hawlgal bay'ada u habboon, mustaqbalka ayaa caddaynaysa qaabkeeda ganacsi. Dadka socotada ah ee inta badan u kala goosha labada magaalo waxay u badan tahay in loo weeciyo dhinaca bay'ada u habboon oo ka jaban. In la doorto in lagu safro tareenada Lumo ee korontada si buuxda u duulaya waxay yarayn doontaa qiiqa kaarboonka safarka ilaa lix meelood meel oo duulimaad ah, sida uu sheegay hawlwadeenku. Iyadoo sii xaqiijineysa diiradda deegaanka, hawlwadeenku wuxuu bixin doonaa 50% cuntada ku salaysan dhirta oo 100% waa dhijitaal si looga fogaado wasakhda waraaqaha. Iyada oo welwelka deegaanku qarka u saaran yahay inuu koro, tallaabadani waxay u arki kartaa Lumo inay noqoto hoggaamiye ka shaqeeya tareenka deegaanka ka warhaya.